मेसु फेरिए, अस्पताल उस्तै, अस्पतालको जिम्मा बोर्ड फस्टको काँधमा – Chitwan Post
मेसु विश्वबन्धु बगाले
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालमा छोटो समयमा पुनः मेसु परिवर्तन भएको छ । केन्द्रमा सरकार स्थायी हुँदा पनि हालै केन्द्रीय तहको मान्यता पाएको भरतपुर अस्पतालमा भने मेसु पटकपटक फेरिएका छन् ।
एक वर्षअघि डा. रविन खड्काको ठाउँमा नियुक्त भएका डा. कृष्णप्रसाद पौडेल अस्पतालमा आठ महिनामात्र टिके । लगत्तै अहिले नयाँ मेसुका रुपमा अस्पतालमै कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वबन्धु बगालेलाई निमित्त मेसुको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कर्मचारी समायोजन हुँदा डा. बगाले रहने वा नरहने भन्ने द्विविधा छ । सरकार वा सम्बन्धित मन्त्री फेरिएपछि फेरिने गरेको मेसु अहिले एउटै सरकार हुँदा पनि दुई पटक फेरिसकेको छ । डा. रूद्र मरासिनीको ठाउँमा डा. रविन खड्का, डा. खड्काको ठाउँमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र हाल डा. पौडेलको ठाउँमा डा. बगाले मेसुमा नियुक्त भएका छन् ।
मेसु फेरिए पनि अस्पतालको समस्या उस्तै
‘अस्पतालमा प्रशासनिक क्षेत्र हाँक्ने मान्छे परिवर्तन भइरहँदा बन्न लागेका कामहरु पनि बिग्रने गरेका छन्, पूर्वमेसु तथा वरिष्ठ फिजिसियन डा. विजय पौडेलले भने, ‘स्थायीरुपमा मेसु नियुक्त भएमा काम गर्न सजिलो हुनेथियो ।’ तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री रहेको पार्टीका चितवन जिल्ला अध्यक्ष प्रेम भुजेलले भने, ‘यसअघिका मेसुका कार्यशैली ठीक नभएकाले फेर्न परेको हो ।’
भरतपुर महानगरका प्रमुख रेनु दाहालले निकै मेहनतका साथ यस अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल बनाइएको भन्दै यसको विकासका लागि एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताइन् । अस्पतालका जग्गाहरुको प्राप्ति र संरक्षणमा ध्यान दिई भौतिक विकास गर्न सकिए अस्पतालमा सुधार हुने उनले बताइन् ।
भरतपुर महानगरका प्रवक्ता एवम् वडा १० का अध्यक्ष अरूण पीडित भण्डारीले अस्पतालमा देखिएको ढल तथा पानी जम्ने समस्या छिटै समाधान गरिने बताए । साथै, उनले पटकपटक मेसु फेरिनु दुःखको कुरा भएको बताए । अस्पतालका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अस्पतालमा कतिपय सुधारका कामहरु आफ्नो पालामा गरिएको बताए ।
को हुन् बगाले ?
विसं ०५३ सालमा सिद्धार्थ वनस्थलीबाट एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका विश्वबन्धु बगाले त्यो वर्षकै नेपाल पहिलो (बोर्ड फस्ट) हुन् । सेन्ट जेभियर्सबाट आईएस्सी गरेका बगालेले मणिपाल शिक्षण कलेज पोखराबाट एमबीबीएस गरे । एमडी गरेका बगाले पाँच वर्षदेखि भरतपुर अस्पतालमा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छन् ।
बिहीबार भरतपुर अस्पताल कर्मचारी युनियनले राखेको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै डा. बगालेले भने, ‘म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर बोल्न चाहन्नँ, जति गर्छु सबैको सहयोगमा बिस्तारै गर्दै जान्छु, त्यो तपाईंहरुले पनि पछि देख्नु नै हुनेछ ।’
आफूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनेभन्दा पनि कर्मचारीको निर्देशन मान्ने गरी काम गर्ने उनले बताए । विकास समिति र सरकारी कर्मचारीबीच विभेद नगरिनेसमेत उनको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
हालका लागि मेसु हुन्छु भन्ने कल्पना नगरेको अवस्थामा यो पदको जिम्मेवारी पाएको भन्दै डा. बगालेले भने, ‘जति दिन बस्छु, राम्रो काम गर्छु ।’ अस्पतालसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरुबारे आफू जानकार भएकाले समस्या समाधानका लागि अहिले नै केही गर्छु भन्दा पनि समयक्रममा बिस्तारै समाधान गर्दै जाने उनले बताए ।